Kaaliyaha Google wuxuu hadda u aqoonsanayaa heesaha inay yihiin Shazam | War gadget
Shazam wuxuu ahaa nidaam aqoonsi muusig gebi ahaanba horseed u ahaaHa i weydiinin sida uu hadda u sameeyo ama sida uu markii hore u sameeyay, laakiin sekando yar oo gabay ah ayaa ku filan in lagu garto oo ay na siiso dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka u ah si aan u dhagaysanno mar kasta iyo meel kasta oo aan doonno . Xaqiiqdu waxay tahay inay ahayd muuqaal xiiso leh waqtigeeda iyo inbadan oo naga mid ah inay sii wadaan isticmaalka maanta.
Noocyada noocan ah waxay ka dhigayaan macno badan caawiyeyaasha dalwaddii sida Siri. Hadda Kaaliyaha Google wuxuu xaqiijiyay inay awood u yeelan doonto inay si dhakhso leh u aqoonsato heesaha kaliya iyaga oo dhageysta. Tallaabo kale oo ay Google ku doonayso inay si muuqata ugu horumariso kaaliyeheeda ku sugan taleefannada gacanta ee ku sii badanaya adduunka oo dhan.
Ilaa hadda waxay ahayd muuqaal gaar ah oo ka mid ah Google Pixel 2 iyo Pixel 2 XL, laakiin hadda waxay joogtay dhammaan aaladahaas oo taageera kaaliyaha dalwaddii Google. Hadda laga bilaabo waxay noo oggolaan doontaa inaan aqoonsanno hees kasta oo ciyaaraysa oo makarafoonku awood u leeyahay inuu aqoonsado, tan waxaan keliya oo aan ku weydiin doonnaa kaaliyaha Waa maxay heesta ciyaareysa waxayna na siin doontaa macluumaadka lagama maarmaanka ah, tan waxaan ku heli doonnaa nooc kaar macluumaad ah oo ku qoran magaca heesta, xiriiriyeyaasha YouTube iyo farshaxanka.
Hadda waxaa imanaya warka xun, hadda shaqadani waxay ku egtahay Mareykanka Mareykanka, ma ogin inta ay qaadaneyso in lagu ballaariyo inta kale ee dhulalka ay Google iyo Android guud ahaan ka shaqeeyaan, waxaan qiyaasayaa howlgelinta tan shaqeynta cusubi waxay noqon doontaa mid isku mid ah oo tartiib tartiib ah, Marka ha lumin rajo (fududahay inaad lumiso adoo tixgelinaya siyaasadda cusbooneysiinta Android) oo sii maalmo kooban, dhawaan waxaad awoodi doontaa inaad aqoonsato dhamaan muusikada aad rabto iyada oo loo marayo Kaaliyaha Google iyo taleefankaaga Android… ma wuxuu noqon doonaa dhammaadka Shazam? Waxaan kugula socodsiin doonnaa Twitter markii shaqadu socoto, intaad booqan karto AndroidSIS.com si aad wax badan uga ogaato mowduuca.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Kaaliyaha Google wuxuu hadda u aqoonsanayaa heesaha inay yihiin Shazam
iFixit wuxuu sameeyaa jarista iPhone X cusub tanina waxay la yaab ku tahay xitaa gudaha